समयमै डोमेन नविकरण नगर्दाको परिणाम: प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा प्रोनोग्राफी | Rajmarga
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा रहेको वेबसाईटमा अश्लील सामग्रीहरु पोष्ट गरिएको छ ।
देशमा बलात्कारको बढ्दो घटनाका बारे चिन्तित केपी शर्मा ओली सरकारले केही बर्ष अघि डिजिटल पोर्नोग्राफीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर ओली आफै पनि यस निर्णयको अज्ञात शिकार भएको देखिन्छ ।
अश्लील सामग्री अपलोड भएपछि पीएमको निजी वेबसाइट नेपालमा ब्लक गरिएको छ । प्रशासनले समयमै डोमेन नविकरण गर्न असफल भएकोले यो समस्या आएको हो।
ओलीको व्यक्तिगत वेबसाइट, kpsharmaoli.com मा लग ईन गर्नेले ओलीसँग सम्बन्धित अपडेट हरू प्राप्त गर्नुको सट्टा अश्‍लील सामग्रीहरू भेट्नेछन् । डोमेन समयेमै नवीकरण नभएको कारण प्रधानमन्त्रीले आफ्नो डोमेन गुमौना पुगे ।
whois.com को अनुसार चीनको सिचुआनमा बस्ने एक जना व्यक्तिले उनको नाममा वेबसाइट दर्ता गरे र अश्‍लील सामग्री अपलोड गरे ।
यदि कोहीले नेपालबाट वेबसाईट खोल्ने प्रयास गरे भने तपाईको इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट सूचना आउँदछ: संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, तथा नेपाल दुर संचार प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम तपाँईले अनुरोध गर्नुभएको वेबसाईट बन्द गरिएको छ ।
अघिल्लो ठेगाना पुनः दावी गर्न असफल भएपछि ओली सचिवालयले स्थानीय डोमेन, kpsharmaoli.com.np, सत्तारूढ पार्टी प्रमुखको व्यक्तिगत वेबसाइटको रूपमा दर्ता गरेको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म अश्लील सामग्री रहेका करिब एक लाख साइटहरू ब्लक गरिएको एनटीएका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बताएका छन् । अवरुद्ध वेबसाईटहरूमध्ये एक प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो व्यक्तिगत वेबसाइट थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार र प्रेस विज्ञ पनि छन् । उनीहरूकाे काम प्रधानमन्त्रीकाे प्रेस र विज्ञता हाे तर उनीहरूले यति धेरै लापरबाही गरेकाे कारणले नै हाम्रो देशकाे प्रधानमन्त्रीकाे बदनाम भएकाे छ । गाडी, तलब र कर्मचारीकाे समेत सुविधा पाउँछन् तर प्रधानमन्त्रीकाे काम भन्दा पनि प्रधानमन्त्री भन्दा पनि ठूलाे बन्दै अाफ्नाे काम गर्दैनन् । कहिलेसम्म विज्ञ नराख्ने नजिकका मान्छेकाे नाममा देशकै बदनाम खेपि बस्ने हाे देशले ?
आइटी विज्ञ पनि हुन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा आइटी शाखा पनि निजामतीकाे उपसचिवकाे कमाण्डमा तर उनीहरूकाे यतातिर ध्यान रहन्न ।
One thought on “समयमै डोमेन नविकरण नगर्दाको परिणाम: प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटमा प्रोनोग्राफी”
Pingback: कसरी भयो प्रधानमन्त्रीको ‘डोमेन’ दुरुपयोग ? - Rajmarga
Previous post: सरकारका दुई वर्ष : उत्पादन वृद्धिसँगै २० प्रतिशतले घट्यो काठको आयात
Next post: भ्रष्टचार गर्नेलाई छाड्दिन : प्रधानमन्त्री ओली